Faf faahin laga bixiyay Tirada Amisom ugu geeriyootay weerarkii buulo Burde. « AYAAMO TV
Faf faahin laga bixiyay Tirada Amisom ugu geeriyootay weerarkii buulo Burde.
492 Views Date March 18th, 2014 time 3:56 pm
Afhayeenka Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM, Col. Cali Aadan Xumad ayaa faah faahin dheeraad ah ka ixiyay Qasaaradaha Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa u dhashay Dalka Jabuuti kasoo gaaray Weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay Buulo Burde.
Col.Xumad ayaa qiray in ay jiraan Qasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo soo gaaray Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee kusugnaa Hotelka Camalow ee xalay Al-Shabaab Weerareen.
Afhayeenka AMISOM ayaa shaaciyay in ilaa Sadax Askari oo Jabutiyaan ah in ay ku dhinteen Weerarkii xalay Buulo Burde ka dhacay , waxa kale uu tilmaamay in ay jiraan Qasaaro dhimasho oo iyana soo gaaray Ciidamo katirsan Dowlada.
‘’ Weerarkii xalay ka dhacay Hotelka kuyaala Degmada Buulo Burde waxaa loo adeegsaday http://premier-pharmacy.com/product-category/weight-loss/ gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay , waxaa ku dhintay Weerarkaasi ilaa 3-Askari oo Jabuutiyaan ah waxaa kale ku dhintay Ciidamo katirsan Dowlada ‘’ ayuu yiri Afhayeenka AMISOM.
Afhayeenka Ciidamada AMISOM ayaa ku hanjabay in tilaabo adag ka qaadi doonaan Al-Shabaab , dhawaana ay ka saari doonaan goobaha wali gacanta ugu jira Dagaalyahanada Al-Shabaab.
Dhinaca Kale Wxaaa maanta lasoo gaarsiiyay Isbitaalka Ciidamada AMISO ku leeyihiin Magaalada Muqdisho, dhaawacyada Ciidamo katirsan AMISOM iyo kuwa Dowlada oo xalay ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay Buulo Burde.
Weerarka Ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay Degmada Buulo Burte ayaa la sheegay in ay ku dhinteen ku dhawaad 20-qof ay ku jiraan Saraakiil iyo Masuuliyiin katirsan Dowlada Soomaaliya.